सन्दीपले भोलि धोनीलाई बलिङ गर्ने पक्का, दिल्ली डेयरडेभिल्सले सोध्यो– भोलि चेन्नईसँगको खेलमा कति विकेट लेलान सन्दीपले ? – Todays Nepal
सन्दीपले भोलि धोनीलाई बलिङ गर्ने पक्का, दिल्ली डेयरडेभिल्सले सोध्यो– भोलि चेन्नईसँगको खेलमा कति विकेट लेलान सन्दीपले ?
नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण उनको टीम दिल्ली डेयरडेभिल्सले चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध पनि उतार्ने भएको छ । दिल्लीले सन्दीपले चेन्नईविरुद्धको खेल खेल्ने जनाउँदै उनले शुक्रबार कति विकेट लिन्छन् होला भनेर सोधेको छ ।
सन्दीपले कति विकेट लिन्छन् त्यो त भन्न गाह्रो छ । तर उनले महेन्द्रसिंह धोनी, सुरेश रैना, शेन वाट्सन, रवीन्द्र जडेजा, अम्बाती रायूडु, ड्वेन ब्राभोलगायतका विश्वकै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानलाई बलिङ भने गर्नेछन् । १२ खेलबाट ६ अ‌ंक मात्र बटुल्न सफल दिल्ली प्लेअफबाट बाहिरिइसकेको छ । अब उसले चेन्नई र मुम्बई इन्डियन्ससँग मात्र खेल्न बाँकी छ । सन्दीप पछिल्लो समय चर्चामा रहेका छन् ।
सन्दीपलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले रोयल च्यालेन्र्जस बेग्लोरविरुद्ध टिम ११ मा समावेश गरेको थियो । अझ दिल्लीले सन्दीपलाई रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरविरुद्ध ओपनिङ बलरका रुपमा नै खेलायो । सन्दीपले आईंपीएलमा आफ्नो डेब्यू खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ४ ओभरमा २५ रन दिएर एक विकेट लिएका थिए । उनको बलिङमा विश्वका दुई उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान विराट कोहली र एबी डिभिलियर्सलाई समेत रन बनाउन हम्मेहम्मे पर्यो । दिल्लीले आफ्नो १२ औँ खेलमा मात्र सन्दीपलाई टिम ११ मा ठाउँ दिएको थियो ।
नेताहरुहरु भारत बिरुद्द चुइक्क बोल्न नसकेको बेला नवलपरासीमा भारतीय दादागिरी बिरुद्द उत्रिय जनता, दिए भारतलाई यस्तो चेतावनी